मरम्मत को प्रक्रिया मा, तपाईं उत्तरार्द्ध बीच, सामाग्री र विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसले तपाईँलाई असामान्य पर्खाल गर्न अनुमति दिन्छ एक संरचनात्मक रोलर, आवंटित गर्नुपर्छ। सजावटी परिष्करण लागि डाटा उपकरण प्रयोग गर्नुहोस्। पर्खालहरु जस्तै काठ, ढुङ्गा बनावट, फर, छाला, आदि रूपमा सतहहरु को एक किसिम सिमुलेट जो छाप, आकार छन्
संरचनात्मक रोलर्स को किसिमहरु
जब एक लामो समय विशेषज्ञहरु लागि सजावट हार्ड ब्रश, combs र स्पंज को प्रकार को लागि सजिला विभिन्न उपकरणहरू प्रयोग गर्नुहोस्। आज, निर्माण उपकरण सम्भव राहत साथ तयार बनाएको रोल पाउन बनाउँछ जो एक विस्तृत मा प्रस्तुत छ। तिनीहरूले plastered पर्खालहरु ह्यान्डल गर्न मदत र फलस्वरूप मास्टर मौका एक वास्तविक तीन आयोमी तस्बिरहरू सिर्जना गर्न।
थप अंक रबर रोलर संरचना को गर्नुपर्छ। तर, यो सामाग्री - छैन केवल एक उपकरण को काम सतह को आधार गठन गर्न सक्ने छ। को सिलेंडर ढाकिएको छ:
संगमरमर प्राकृतिक पत्थर समान भएको सजावट एक छाला उपकरण सतह प्रयोग उत्पादन गर्दा कपडा रोलर लागू गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ। यी रोलर्स संग चित्रित सतह सम्हाल्न जब सञ्चालन। तपाईं एक मानक फोम सिलिन्डर प्राप्त भने, त्यसपछि तपाईं आफैलाई यस्तो रूख छाल संरचना रूपमा प्राकृतिक ढाँचाहरू, सिर्जना गर्ने प्रयास फोम, मुद्दा, सुतली को टुक्रा एक काम भाग मा घुमावदार द्वारा थप्न सक्नुहुन्छ।
प्लास्टर लागि रोलर्स विशेषताहरु
लागि रोलर संरचनात्मक प्लास्टर एक कठोर कोटिंग हुन सक्छ। यो उपकरण तपाईं अझ उच्चारण सजावट सिर्जना गर्न, तर यो धेरै महंगा खर्च हुनेछ अनुमति दिन्छ। यस्तो उपकरणहरू को प्रयोग, धेरै पटक हुन सक्छ जो एक convex ढाँचाको छ भन्दा उत्पादक रबर समाधान हुनेछ,। यो नवीनता पश्चिमी देशका हामीलाई आउँछ, र पहिले नै पसलहरूमा तपाईं geometrical तथ्याङ्कले, फूल, चरा, पात र जनावरहरूको प्रकार मा ढाँचाहरू र बनावट को एक किसिम पाउन सक्छ।
संरचनात्मक प्लास्टर लागि रोलर दुई तरिकामा मध्ये प्रयोग गर्न सकिन्छ। पहिलो समाधान गर्न बाँकी गर्नुपर्छ जो प्लास्टर, को प्रारम्भिक आवेदन समावेश छ। पछि परिष्करण रोलर मा dipping, सुरु वा पुटीन को प्लास्टर पत्र को लागि आवेदन संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। दोस्रो विधि सामान्यतया मुद्रण रबर उत्पादनहरु बनाउन patterned रंग staining विधि उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ।
संरचनात्मक रोलर को प्रयोगको लागि सिफारिसहरू
प्लास्टर तह जीवन विस्तार गर्न र खुर को समस्या सामना छैन क्रममा, पर्खाल थप प्रक्रिया हुनुपर्छ। सतह धूलो र पुरानो समाप्त को माटो को साफ छ। एक पटक मा, तपाईं प्राइमर लागू गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि पंक्तिबद्ध - पुटीन। यो आकार 300 बाट 600 मिमी भिन्न जो spatulas लागू गर्न सक्नुहुन्छ।
पुटीन समान रूप लागू गर्नुपर्छ, उपकरण धारण दबाव धेरै छैन आवश्यक छ। पहिलो तह सुकाएपछि जसको आकार 600 मिमी एक स्पाटुला, प्रयोग, दोस्रो लागू गर्नुपर्छ। आवेदन र महीन दुई दिशामा बाहिर हुनुपर्छ - लम्ब।
अर्को चरणमा, तपाईँले सजाय सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। ड्राई प्लास्टर एक वर्दी स्थिरता गर्न ल्याउन प्रयास, पानी संग मिश्रित हुनुपर्छ। त्यसपछि मास्टर पर्खाल तह मा मिश्रण 2-4 मिमी छ लागू हुनेछ। आधार एक स्पाटुला संग मिलेका र 10 मिनेट को लागि बाँकी छ, संरचना thickens। थप संरचनात्मक रोलर खत्म सुरु हुन्छ। आन्दोलन यो जोडी काम गर्न यस मामला मा थप सुविधाजनक छ, तल माथि बाट निर्देशित हुनुपर्छ, पहिलो व्यक्ति गर्दा दोस्रो एक राहत सिर्जना गर्न, प्लास्टर को आवेदन मा लगे गरिनेछ।
प्लास्टर dries जब पर्खालहरु को रंग मा सबै पछि काम बाहिर दुई दिनपछि लगे गर्नुपर्छ। आवश्यक भएमा, सम्पूर्ण पर्खाल रङ लगाउन लामो झपकी रोलर खरिद हुनुपर्छ। तपाईं मात्र खडा क्षेत्रमा मा रंग लागू गर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंले छोटो झपकी रोलर चयन गर्नुपर्छ।
संरचनात्मक रोलर प्रयोग सिद्धान्तहरू
संरचनात्मक रोलर केही नियमहरू विषय प्रयोग गर्न। तपाईं सही आवेदन प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि धेरै उपकरण को काम सतह आवश्यक छैन। आन्दोलनहरु चिल्लो हुनुपर्छ। दोस्रो ट्रयाक गर्न प्राप्त, तपाईं आवश्यक ठाउँमा सार्ने सुरु गर्न जहाँ पहिलो रेखाचित्र को सीमा। मिल्दाजुल्दा हुनु हुँदैन।
छत मा संरचनात्मक रोलर अलिकति सतह विरुद्ध थिचिएको, तर कम अहम शक्ति अनुगमन जारी। तपाईं ढाँचा पनि प्रमुख हुनेछ याद भने, यो एक बिट sanding ग्रिड प्रयोग चिकना हुन सक्छ।
सतह सिर्जना गर्नुहोस् "कोट"
सामान्य सजावट एक आंकडा रोलर, एक "कोट" द्वारा सिर्जना हुन्छ। प्लास्टर छिडकाव को यस्तो पत्र सिर्जना विशेष मिसिन, को ब्रश वा कुचो प्रयोग शामिल। सबै भन्दा साधारण FACADES "कोट" मा, तर आकर्षक र घर भित्रका हेर्न हुनेछ।
पहिलो चरणको पर्खाल पुटीन र प्लास्टर लागू गर्नुपर्छ मा, त तपाईं एक संरचनात्मक रोलर लागू गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं त्रुटि नोटिस भने, प्लास्टर एक तह असमान, साबित त्यसपछि स्पाटुला संग, तपाईं अतिरिक्त हटाउन सक्नुहुन्छ। कोटिंग प्रक्रियामा विश्रामहरू "कोट" अवैध, अन्यथा संरचना dries, जस्तै संयुक्त को किनाराको मा सजिलै देखिने हुनेछ।
पुरानो कोटिंग्स हटाइएका छन् पर्खाल मा काम सुरु गर्नु अघि, समस्या क्षेत्रमा उपचार। को सजावट धेरै रंग प्रयोग गर्न सकिन्छ। यस मामला मा, प्लास्टर धेरै पत्रहरु मा, पहिलो कालो छ, तेस्रो तह तपाईं अन्त देख्न चाहेको एउटा रंग हुनेछ गर्दा दोस्रो, monotonous हुनुपर्छ लागू हुनुपर्छ। को प्यालेट विभाजन, तपाईं Masking टेप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो सजावटी प्लास्टर 20 मिनेट सुक्खामा कि सम्झना गर्नुपर्छ, त्यसैले यसलाई सानो पैच लागू गर्न आवश्यक छ।
अवलोकन माइक्रोवेव GORENJE MO20MW
पानी को लागि चुम्बकीय फिल्टर: विकल्प, सञ्चालनको सिद्धान्त, समीक्षा
गाडे तार पत्ता लागि मेटल डिटेक्टर
एल्यूमीनियम टास्ने टेप: प्रयोग र विशेषताहरु
सही गठन गर्ने: उनि के गर्दै छन्
दबाइ "Geksoral": प्रयोगको लागि समीक्षा र सिफारिसहरू
Sunbittern। कसले sunbittern छ र किन यो यति नाम छ?
हिमशैल - यो के हो? रूपमा icebergs गठन गर्दै
यो ज्ञात Hopersky रिजर्व?
यो श्रृंखला "Narco": अभिनेता र भूमिकाको
ओग्ले Garbuz: जीवनी, व्यक्तिगत जीवन, फिलिमोग्राफी
महिना द्वारा आहार नर्सिङ आमा (Komorowski)। जन्म दिने पछि आहार
Bursitis - bursitis को उपचार। "Bursitis" रोग। काँध bursitis को उपचार
अगाडि प्रोफाइल। यसको प्रकार र आफ्नो विशेषताहरु